‘समाचार’ बन्न पनि मृत्यु नै हुनु-पर्ने रहेछ!
उफ! लास्टै गलियो यार आज’ मनमनै गुन्गुनाएँ। मुखको चुकुलभन्दा पहिला कोठाको ढोका खोलेँ। घ्याचक्क गर्दै खुल्यो ढोका।
यति भव्य र फराकिलो संसारमा आफन्तको मन जस्तै संकुचित र साघुँरो छ कोठा पनि।
२०७८ श्रावण ५, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 1504 Views